Pemberton Lake View Chalets-Warren Chalet - I-Airbnb
Pemberton Lake View Chalets-Warren Chalet
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguDebbie & Pete
UDebbie & Pete yi-Superhost
Lo mhlaba ukwindlela ethe cwaka (ngaphandle kohola wendlela) kwindawo ezolileyo yeepropathi ezincinci kunye neefama zokuzonwabisa.
Iqulathe ii-chalets ezine zomhlaba ezineembono ezintle kulo lonke echibini kunye neLavender kunye neBerry Farm Cafe kunye neGadi. Phakathi kwee-chalets kunye nechibi kukho udonga olubanzi lwengca ezantsi ukuya kumda wamanzi ngamaxesha athile olutyelelwa ziikhangaru kunye nezilwanyana zeentaka.
Emva kwee-chalets apho uqhuba khona kukho indawo yesitayile sepaki yemithi emide kunye neendawo ezinengca. I-chalet nganye ineendawo zokupaka kule ndawo ngqo emva kwe-chalet.
Kukho ukufikelela okuhambahambayo kwicafe yaseLavender Berry Farm ejikeleze umda wamachibi (imizuzu emi-2 yokuhamba), kunye nokufikelela kwipaki yesizwe. Ukuba uqhubeka udlula kuzo zone ii-chalets uya kufumana iofisi / ulwamkelo kumda wendlu yabanini.
I-chalet yakho inokufikelela kwinani lezinto eziluncedo:
+ ILavender Berry Farm Cafe kunye nemihlaba kukuhamba ngemizuzu emi-2 ujikeleze umda wamachibi (ngoLwesithathu ukuya kwiLanga 9.30 - 4pm) banika ikofu enkulu, isidlo sasemini esilula kunye neepanekuku zamaqunube, kwaye banezilwanyana zokutyelela kwipropathi.
+ yi-4km kuphela ukuya kwidolophu yasePemberton enekhefi, igrosari kunye nezinye izinto eziluncedo
+ Ukufikeleleka kwendlela yokuhamba ngeenyawo kunye neebhayisekile ecaleni kwepropathi ekwipaki yesizwe
+ I-BBQ yegesi enehood kwiveranda yakho yabucala
+ Ukufudumeza umlilo wokhuni ngaphakathi endlini ngeenkuni ezibonelelweyo
+ Ukuhlamba iimpahla ngewasha kunye nesomisi kwindawo
+ Ipaki yeSizwe yaseGloucester ecaleni komda wepropathi (ukuhamba / ukukhwela ibhayisekile kuyafikeleleka)
+ I-Chalet ikwanayo neengubo zombane, iingubo zombane, iintsiba ezisezantsi, ikhitshi, igumbi lokuhlambela elinendlu yangasese eyahlukileyo, indawo yokuhlala eneTV, iDVD, umlilo weenkuni kunye nemibono.
4.86 · Izimvo eziyi-22
Ii-chalets zonke zineembono ezimangalisayo zechibi kwaye zijongene neLavender & Berry Farm Cafe (evulekileyo ngolweSithathu ukuya kwiLanga 9.30-4). I-Brown Road yindlela ezolileyo ephuma kuhola wendlela eneefama zokuzilibazisa kunye neendawo ezincinci ze-acreage kunye nabamelwane abanobuhlobo! Siku 4km nje ukuya kwiindawo eziluncedo zasedolophini kwaye kufutshane nezinto ezinomtsalane kule ndawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Debbie & Pete
Iofisi/ulwamkelo lwethu lukwikona yendlu kwaye luvulwa ngo-8.30am - 5pm phakathi evekini, (9.30am - 4pm ngeempelaveki).
Nceda uze apha ukuze ujonge, okanye ufowunele ngayo nayiphi na imibuzo onokuba unayo. Sisendlini ukuba uneengxaki ezifuna ukuhoywa ngokukhawuleza ngaphandle kwezi yure.
Nceda uze apha ukuze ujonge, okanye ufowunele ngayo nay…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pemberton